Nepal: Fuulidda Buurta Everest oo la ogolaaday - Tilmaan Media
Nepal: Fuulidda Buurta Everest oo la ogolaaday
Dowladda Nepal ayaa maanta oo khamiis ah soo saartay go,aan u ogolaanaya dadka doonaya in ay tafaan Buurta Everest iyo buuraha kale ee dhaaheer ee dalkaas, kadib muddo afar bilood ah oo la mamnuucay Koronafayras dartiis. Go,aankan ayaa waxaa ku dhawaaqay afhayeen wasaaradda Dalxiiska ee Nepal.
Todobaadkii hore ayay dowladda Nepal ku dhawaaqday in ay qaaday xayiraadihii lasoo rogay si looga hortago faafidda Koronafayras, si loo yareeyo saamaynta taban ee uu dhaqaalaha dalkaas ku yeeshay koronafayras.
Go,aankaan ayaa kusoo aadaya iyadoo wali uu jiro kor kac uu samaynayo tirada dadka laga helayo Koronafayras.
Buurta Everest waaa buurta ugu dheer caalamka. Fiidda ugu saraysa ee buurta waa meesha ay kabilaabato xuduuda udhaxaysa Shiinaha iyo Nepal. Buurta ayaa badda dusheeda kasaraysa 8,848 mitir (29,029 ft).
Dherarka iyo bilicda quruxsan ee Buurta ayaa sanad kasta soo jiitta kumanaan dalxiisayaal ah oo dunida daafaheeda ka yimaada, waxayna kamid tahay ilaha dhaqaale ee dalka Nepal.
Mahdi Guuleed oo Xarigga ka Jaray qeybta karantiilka cudurada ee cisbitaalka Banaadir